चाइनिज युवतीहरु किन यति धेरै सुन्दरी हुन्छन यस्तो छ कारण जानिराखौ ! —
एजेन्सी : सौन्दर्य ताको कुरा गर्दा चाइनिज युवतीहरु अरु देश हरु भन्दा भिन्न प्रकारका हुन्छन ! चाइनिज युवतीहरुको सुन्दरता को चर्चा बिस्वमै हुन्छ ! चाइनिज युवतीहरुले आफुहरुलाई सुन्दर बनाउन को लागि बिभिन्न उपाएहरु अपनाउने गरेका हुन्छन ! त्यो कारण ले पनि चाइनिज युवतीहरु आफ्नो अनुहार बेदाग , चम्किलो अनि नरम छाला को लागि बिस्वभर परिचित छन् !
घरेलु तथा पारम्परिक तरिका अपनाएरकै भरमा उनीहरु यति धेरै सुन्दर देखिएका हुन् ।सफा अनुहारको लागि चिनियाँ युवतीहरु पुदिना प्रयोग गर्छन्। पुदिनाको पात पिसेर अनुहारमा लगाएर सुकेपछि धुन सकिन्छ।
अनुहारलाई चाउरीपनबाट बचाउन चिनियाँ युवतीहरु अण्डा प्रयोग गर्छन्। अण्डाको सेतो भाग अनुहारमा लगाउनुस् अनि २० मिनेट पश्चात चिसो पानीले धुनुस्। अण्डामा हुने एस्ट्रिजेन्टले छाला कसिलो बनाउन मद्धत गर्छ।
यसको साथै चिनियाँहरु मसाजमा विश्वास गर्छन्। मसाजले रक्त सञ्चार बढ्छ र कोषहरुको ‘रिजेनेरेशन’ बढ्छ जसको कारण आँखा सुन्निएको जस्तो हुन कम हुन्छ।
चिनियाँ युवतीहरु चामलको पानीलाई टोनरको रुपमा प्रयोग गर्छन्। यसको लागि पालिस नगरिएको चामललाई एउटा भाँडोमा राखेर भिजाउँनुस। केही समयमा माथी सेतो तह देखिन्छ। त्यसपश्चात पानी मात्र छानेर त्यसलाई फ्रिजमा राख्नुस्। यो पानी तीनचार दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। कपासको मद्धतले यो अनुहारमा लगाउनुस्। तीनचार दिन पश्चात फेरि यसरी नै नयाँ पानी बनाएर फ्रिजमा राख्नुस्।
चिनियाँ युवती ग्रिन-टीको सहयोग लिन्छन्। हरेक दिन बिहान कप ग्रिन टि पिउँनाले पेट स्वस्थ्य हुनुको साथै नियमित प्रयोगले जवान देखिन मद्दत गर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस ! हाँस्यकलाकार ‘जिग्रीपाँडे’ वि’रुद्ध मिडियाहवले दियो प्रहरीमा उ’जुरी
काठमाडौँ – हाँस्यटेलिसिरियल सक्किगोनी को टिम वि’रुद्ध मिडिया हबले प्रहरीमा उ’जुरी हालेको छ । नेपाली टेलिभिजन बाट प्रसारण हुँदै आइरहेको हास्य टेलिश्रृंखला ‘सक्किगोनी’को टिम वि’रुद्ध मिडियाहवले प्रहरीमा कपी राइटको उ’जुरी हालेको हो । हाँस्य टेलिसिरियल ‘भद्रगोल’ का क्यारेक्टरहरू नक्कल गरेको भन्दै मिडिया हबले कपि राइटको उ’जुरी हालेकाले आफूलाई त्यस विषयमा छलफल गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुबाट आफूलाई फोन आएको अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ले जानकारी दिए ।
मिडिया हवले भने जिग्री, पाँडे, बले कक्रोच, सितेबा जस्ता दर्जनौं, क्यारेक्टरहरु आफ्नो उत्पादक भएको भन्दै तीनिहरुमा आफ्नो हक लाग्ने बताएको छ । उ’जुरीमा कुनै क्षतिपूर्तिको मागदावी भने नगरेको मिठिया हवले जनाएको छ । मिडिया हबसँग कुरा नमिलेपछि सोहि टिमले अहिले सक्किगोनी प्रशारणमा ल्याएको छ ।
चर्चित भाइरल अघोरी बाबाले गरे बिवाह गंगालाई साछि राखेर खाए कसम श्रीमतीको आखामा गहभरी आसु हेर्नुहोस भिडियो !
काठमाडौँ । म्यासेज गर्ने यी ५ तरिकाबाट थाहा हुन्छ , तपाई उसको लागि स्पेसल मान्छे हो...
भगवानलाई भाकल गर्नु भनेको के हो ? के भाकल गरेपछि दिनै पर्छ ? नदिदा के हुन्छ ? पुरा पढ्नुहोस !
सास्त्रकानुसार भाकल भनेको के हो ..? के को लागि गर्नु पर्छ भाकल ..? हामीले सुन्ने गर्दछौ...
जानिराखौ ! पुरुष होस् या महिला यी ४ काम सकेपछि नुहाउनुपर्छ :
पुरुष होस् या महिला यी ४ काम सकेपछि नुहाउनुपर्छ : जानिराखौ ! प्राय जसो मानिस हरु...